Ababali be-DNS | Ama-Franchise Wokweluleka Ngebhizinisi | I-Franchiseek
»Amathuba weFranchise»I-Franchise yababali be-DNS
I-Franchise yababali be-DNS
Yakha ikusasa lakho nge-DNS Accountants Franchise nebhizinisi lakho ngethuba lethu eliqinisekisiwe. Nge-DNS Accountants Franchise sikunikeza wonke amathuluzi nokusekelwa okudingayo ukuze ukhulise umkhuba wakho wokubalwa kwama-akhawunti okukuvumela ukuba uzisebenzele kodwa hhayi uwedwa futhi ngaphandle kwezingozi zokuqala ngokwakho. Uzobe ujoyina umkhiqizo onedumela elihle futhi owaziyo kusukela ngosuku 1. Sikuqondisa kuzo zonke izinto zebhizinisi ukuqinisekisa ukuthi elakho liyaphumelela ngeminyaka yethu eyi-15 yesipiliyoni.
Yenza okusemandleni akho futhi sinikeze okusele!
I-DNS izokuvumela ukuthi:
Balekela impilo yenkampani kepha sebenza ngombono webhizinisi nokusekelwa.
Lawula umsebenzi wakho ngenkululeko yezezimali.
Sebenzisa kakhulu ulwazi lwakho neziqu.
Ukubhekana nezinguquko zobuchwepheshe.
Kungani ukhetha i-DNS?
Ukuqeqeshwa nokwesekwa-Sikunikeza konke ukuqeqeshwa, ukuphathwa kanye nokwesekwa kwehhovisi langemuva ukuze kungagcini nje ngokukuqala kodwa nokuqinisekisa ukuthi uyaqhubeka nokukhula futhi wakhe ibhizinisi eliphumelelayo endaweni yakho ekhethekile. Futhi unganweba ungene ezindaweni eziningi. Ukusekelwa kwethu kunikezwa ithimba lethu lochwepheshe abanamakhono kakhulu futhi abaqeqeshiwe.
Iphakheji yethu- ikuvumela ukuthi usebenze endaweni yakho ekhethekile
Izinketho eziguquguqukayo- Sinikeza iphakethe le-Flexible ukuze ivumelane nesipiliyoni sakho se-accounting ukuze uqiniseke ukuthi uthola ukusekelwa nobuchwepheshe obudingayo ... lapho ubadinga. Sikwazi ngisho nokunikela ngezinhlelo zokukhokha ngemali ye-franchise uqobo
Imikhombandlela eyenziwe- Ukukusiza ukuthi uqalise sikunikeza inombolo ehamba phambili yemikhakha njengengxenye yephakeji lakho lokuqala ukuxhasa ibhizinisi lakho elikhulayo ngenketho yokwenza lokhu kuhola kuqhubeke ngamasu wethu webhizinisi afakazelwe
Isofthiwe yethu eyingqayizivele esekelwe efwini- Ukufinyelela ngokushesha kuma-akhawunti amaklayenti akho & ne-franchise yokubika kwakho nohlelo lokuphatha noma kunini, noma kuphi. Joyina i-accounting revolution yethu!
Abaphumelele imiklomelo eminingi- siyaziqhenya ngempumelelo yethu lapha kwi-DNS nemiklomelo esiyitholile kuze kube manje ifaka ngezansi futhi okuningi okuningi kungabonakala kumkhakha wethu.
Uma ungumgcini wamabhuku ezimali ofanelekayo noma usebenza nomkhakha wezezimali ngezinga eliphakeme lebhizinisi, idrayivu nothando thintana nathi namuhla ukuthola okwengeziwe ngethuba lethu elimnandi.
About Us McDaan Limited yinkampani ezimele ebhalisiwe futhi ilawulwa e-UK. Sisebenze kusukela…
Ibhizinisi elisiza zonke izingane ukuba lidlule Elinye lamathuba amahle kakhulu wokutshala imali kwasekhaya aphansi atholakala e-UK. About Us We…
I-Harmony Ekhaya iyi-Franchise ewina imiklomelo eminingi ifuna osomabhizinisi abanakekelayo bathathe i-nanny uNdunankulu nabasebenzi bendlu abasebenza kuyo ...